Levitika 8 - Ny Baiboly
Levitika toko 8
Fanamasinana an'Aarona sy ny zanany.
1Ary niteny tamin'i Moizy Iaveh nanao hoe: 2Alao Aarona sy ny zanany miaraka aminy, ny fanamiana, ny diloilo fanosorana; ny ombalahy hatao sorona noho ny ota, ny ondralahy roa, ary ny sobika misy ny mofo tsy misy lalivay; 3ka vorio ny fiangonana rehetra, ho eo anoloan'ny varavaran'ny trano lay fihaonana.
4Dia nataon'i Moizy izay nandidian'ny Tompo azy, ka vory teo anoloan'ny varavaran'ny trano lay fihaonana ny fiangonana, 5dia hoy Moizy tamin'ny fiangonana: Izao no nasain'ny Tompo hatao:
6Nasain'i Moizy nanatona Aarona sy ny zanany, ka nodioviny tamin'ny rano. 7Ary Aarona nampiakanjoiny ny akanjo anatiny, nohetràny ny fehin-kibo, nampiakanjoiny ny akanjo lava, nosalorany ny efoda izay nogiazany tamin'ny fehin'efoda, ary nafatony teo aminy. 8Napetany taminy ny saron-tratra, ary nakambany tamin'ny saron-tratra ny Orima sy ny Tomima, 9nasatrony ny lohany ny hamama, dia nataony teo anoloan'ny hamama ny takela-bolamena, ilay diadema masina, araka ny nandidian'ny Tompo an'i Moizy. 10Ary nalain'i Moizy ny diloilo fanosorana dia nohosorany ny Fonenana mbamin'izay rehetra tao anatiny, ka nohamasininy. 11Nofafazany izany impito ny otely; nohosorany avokoa ny otely sy ny fanaka rehetra momba azy mbamin'ny tavy amam-paladiany, mba hahamasina azy. 12Dia norotsahany diloilo fanosorana ny lohan'i Aarona, ka nohosorany izy, mba hahamasina azy. 13Nasain'i Moizy nanatona koa ireo zanak'i Aarona dia nampiakanjoiny ny toniky, nohetràny fehin-kibo, ary nafatony teo aminy ny mitra, araka ny nandidian'ny Tompo an'i Moizy.
14Dia nasainy naroso ny ombalahy hatao sorona noho ny ota, ka Aarona sy ny zanany nametra-tànana teo ambonin'ny lohan'ny ombalahy hatao sorona noho ny ota. 15Namono azy Moizy dia naka tamin'ny rà ka notentenany manodidina tamin'ny rantsan-tànany ny tandroky ny otely ary nanadio ny otely izy, naidiny teo an-tongotry ny otely ny rà ary nanamasina azy izy, nanao ny fanonerana ao aminy.
16Manaraka izany nalainy avokoa ny sabora, ny saron-tsinainy, ny saron'atiny, ary ny voany roa mbamin'ny sabora momba azy ka nodorany hanetona teo ambonin'ny otely. 17Fa ny tenan'ny ombalahy kosa, ny hodiny, ny nofony, ary ny tain-drorohany, dia nodorany tany ivelan'ny toby, araka ny nandidian'ny Tompo an'i Moizy.
18Dia nasainy naroso ny ondralahy hatao sorona dorana, ka Aarona sy ny zanany nametra-tànana teo ambonin'ny lohan'ny ondralahy. 19Dia novonoina izy, ary Moizy nanidina ny ràny manodidina tamin'ny otely.
20Rahefa izany norasainy ho voatetika ny ondralahy, dia nodoran'i Moizy hanetona ny lohany mbamin'ny tetiny ary ny saborany. 21Nosasana tamin'ny rano ny tsinainy aman-tongony, dia nataon'i Moizy indray mandotra hanetona ny ondralahy manontolo; sorona dorana ho hanitra ankasitrahana izany, sorona atao amin'ny afo ho an'ny Tompo, araka ny nandidian'ny Tompo an'i Moizy.
22Nasainy naroso koa ny ondralahy anankiray, ny ondralahy fanokanana; ka Aarona sy ny zanany nametra-tànana teo ambonin'ny lohan'ny ondralahy aloha, 23izay vao namono azy Moizy, dia naka tamin'ny rany, nanentenany ny tendron-dravin-tsofin'i Aarona ankavanana, ny ankiben-tànany havanana, ary ny ankiben-tongony havanana. 24Nampanatoniny koa ny zanak'i Aarona, dia notentenany rà ny tendron-dravin-tsofin'izy ireo ankavanana, ny ankiben-tànany havanana, ary ny ankiben-tongony havanana, vao naidiny manodidina amin'ny otely ny rà. 25Rahefa izany nalainy ny sabora, ny hofany, ny sabora saron-tsinainy rehetra, ny saron'atiny, ny voany roa mbamin'ny saborany ary ny feny havanana. 26Ny sobika misy ny mofo tsy misy lalivay izay napetraka teo anatrehan'ny Tompo, nangalany mofomamy tsy misy lalivay iray, mofomamy misy diloilo iray, ary mofo manify iray, napetrany teo ambonin'ny sabora sy ny fe havanana, 27nataony teo an-tànan'i Aarona sy ny zanany ireo zavatra ireo, dia nahevahevany ho fanatitra teo anatrehan'ny Tompo. 28Dia nesorin'i Moizy avy teo an-tànany indray ireo ka nodorany hanetona eo ambonin'ny otely teo ambonin'ny sorona dorana, fa sorona fanokanana izany, ho hanitra ankasitrahana, sorona atao amin'ny afo ho an'ny Tompo.
29Dia nalain'i Moizy ny tratran'ny ondralahy fanokanana, ka nahevahevany ho fanatitra eo anatrehan'ny Tompo; io no anjaran'i Moizy araka ny nandidian'ny Tompo an'i Moizy.
30Dia nakan'i Moizy ny diloilo fanosorana sy ny rà teo ambonin'ny otely, nafafiny tamin'i Aarona sy tamin'ny fanamiany, ary tamin'ireo zanak'i Aarona sy tamin'ny fanamiany, ka nohamasininy avokoa Aarona sy ny fanamiany, ary koa ny zanany sy ny fanamiany.
31Ary hoy Moizy tamin'i Aarona sy ny zanany: Andrahoy eo anoloan'ny varavaran'ny trano lay fihaonana ny hena, fa eo no hihinananareo azy, miaraka amin'ny mofo ao anaty sobika fanokanana, araka ny nandidiako hoe: Aarona sy ny zanany no hihinana azy. 32Ary dory amin'ny afo izay sisa tsy lany amin'ny hena sy ny mofo. 33Tsy hiala eo anoloan'ny varavaran'ny trano lay fihaonana hianareo, mandritra ny hafitoana, dia mandra-pahatapitry ny andro fanokanana anareo, fa haharitra hafitoana ny fanokanana anareo. 34Izao atao anio izao, dia nodidian'ny Tompo hatao mandritra ny hafitoana hanaovana ny fanonerana ho anareo. 35Hijanona hafitoana andro aman'alina, eo anoloan'ny varavaran'ny trano lay fihaonana hianareo, ka hitandrina ny didin'ny Tompo mba tsy ho faty hianareo, fa izany no didy azoko. 36Dia nataon'i Aarona sy ny zanany ny zavatra rehetra nandidian'ny Tompo tamin'ny alàlan'i Moizy. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0850 seconds